Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A August 2010 (5)
Q and A August 2010 (5)
1. အူကျတာက တစ်ဖက်ကြီး၊ တစ်ဖက်သေးဖြစ်နေတယ်။
2. စအိုနားမှာ အသားပိုလို ပေါက်နေပါတယ်။
3. ကျွန်တော့်ချစ်သူ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုးရှိမရှိ သွေးစစ်ခဲ့ပါတယ်။
4. ယောက်ျားလေးများရဲ့ငယ်ပါက မာတင်းလာတဲ့အခါ။
5. ချောင်းဆိုးရင် သောက်ရမဲ့ဆေး အမည်ကို ရေးပေးပါလား။
6. (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်တာများလို့ အကြောပြတ်တာလို့ ပြောကြပါတယ်။
17 Aug 10, 17:08
Q: ကျွန်တော် အူကျနေပါတယ် ဒါပေမဲ့အူကျတာက တစ်ဖက်ကြီး၊ တစ်ဖက်သေးဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒါလေ သွေးထုံးတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ အဲ့ဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ခွဲရင်ကော ဘယ်လောက်မှ ကျက်မှာလဲ။ ခွဲစိတ်ရင်ကော။ Danger ဖြစ်စေနိုင်သလား။
A: အူကျတာ နှစ်ဖက်လုံးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ တဖက်က အူကျ နောက်တဖက်က တခြားဟာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ နှစ်ဘက် အရွယ် ညီချင်မှ ညီမယ်။ Hernia အူကျတာ၊ Hydrocele မုတ္တရောဂါ၊ နဲ့ Varicocele (ဗေရီကိုဆီးလ်)၊ တွေဆိုရင် ခွဲရမယ်။ ဒီနေရာမှာ ခွဲတာတွေက ပုံမှန်ရုစိုက်စရာတွေထက် ပိုပြီးမလိုပါ။ ချုပ်ရိုးကို ၇ ရက်မှာ ဖြေလေ့ရှိတယ်။ ခွဲပြီး နားတာ ကောင်းပါတယ်။
17 Aug 10, 16:30
Q: ကျွန်တော့် စအိုနားမှာ အသားပိုလို ပေါက်နေပါတယ်။ အဲ့ဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ပြောပေးပါအုံး။
A: စအိုနားမှာဖြစ်နိုင်စရာရောဂါတွေ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ Piles လိပ်ခေါင်း၊ FIA ဂရင်ဂျီနာ၊ FIA စအိုကွဲနာ၊ Lipoma/Cyst အသားပို၊ Wart ကြွက်နို့၊ ခံစားရတဲ့ လက္ခဏာတွေ၊ ဘယ်လောက်ကြာပြီ၊ သိဘို့ လိုသေးတယ်။
ကျွန်တော့်ချစ်သူ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုးရှိမရှိ သွေးစစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဖြေက HBs Antibody = Positive ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါ ဘီပိုး ရှိတာလားဆရာ။ သူကပြောတော့ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားလို့ ဒီလို အဖြေ ထွက်တာလို့ ပြောပါတယ်။ ရောဂါမရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သီတင်းကျွတ်ရင် လက်ထပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော့် Result ကHBsAg = non reactive ပါ။ ကျွန်တော်က ကာကွယ်ဆေး မထိုးရသေးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ စစ်တဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်း ချင်းမတူပါဘူးဆရာ။ အဲဒါ
၁။ ရောဂါ ရှိ မရှိ
၂။ ရှိခဲ့ရင် လက်ထပ်လို့ ရ မရ ကျေးဇူးပြုပြီး ပြန်ဖြေပေးပါခင်ဗျား။
Hepatitis B surface antigen (HBsAG) ဆိုတာ ဗိုင်းရပ်စ် ရဲ့ မျာက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ပရိုတင်းကိုစစ်တာ။ လတ်တလော ရော နာတာရှည်ပါ တွေ့နိုင်တယ်။ ဒီပို ရှိနေသူတွေကို စမ်းနည်းဖြစ်တယ်။ acute hepatitis B ရဲ့ အစောဆုံး သင်္ကေတ လည်း ဖြစ်တယ်။ ရောဂါလက္ခဏာ မပြသေးသူဖြစ်မယ်။ နလံထသူတွေမှာ မရှိတော့ဘူး။ နာတာရှည်ဖြစ်တော့မဲ့သူလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဘီပိုးရှိသူနှင့် လက်ထပ်မည့်သူ -
• ရှိနေသူကလဲ ၆ လတခါ ဆရာဝန်ပြပါ။
• လက်ထပ်မဲ့သူဟာ ဘယ်အရွယ်ရှိနေနေ Hepatitis B vaccine ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။ (အများအားဖြင့် အသက် ၁၈ နှစ်အောက်တွေကိုသာ ကာကွယ်ဆေး ထိုးခိုင်းတာပါ။)
• အတူနေရင် (ကွန်ဒွမ်) သုံးပါ။
• (ကွန်ဒွမ်) မသုံးမိလို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ကလေးရချင်လို့ (ကွန်ဒွမ်) မသုံးတာဖြစ်ဖြစ်၊ Hepatitis B immune globulin (HBIG) ဆေးထိုးလိုက်ပါ။ ဒီဆေးက ကာကွယ်ဆေး မဟုတ်ပါ။ ဘီပိုးကို ပြန်တိုက်ဖျက်ပြစ်မဲ့ဆေး ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ ပါတ် အတွင်း၊ အကောင်းဆုံးကတော့ ၂၄ နာရီအတွင်း (HBIG) IM 0.06 mL/kg ထိုးပါ။
• အရင်က ကာကွယ်ဆေး ထိုးမထားသူဆိုရင် (HBIG) ကို နောက် ၁ လနေရင် တခါထပ်ထိုးပါ။
• ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး Hepatitis B vaccine ကို ကလေး မွေးမွေးချင်း ၁ ခါ၊ နောက် ၁ လ တခါနဲ့ ၆ လတခါ၊ ပေါင်း ၃ ခါ ထိုးရပါမယ်။
• အိမ်မှာ ပိုးသန့်ဆေး တမျိုးမျိုး အမြဲဆောင်ထားပါ။ ဥပမာ ရေ ၁ ကွာတထဲမှာ အဝတ်ချွတ်ဆေး ခေါ်တဲ့ Bleaching powder မှုံ့ လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းနဲ့ ရေ (၁ဝ ဆ ၁ ဆ) ဖျော်တာကို သွေး၊ အန်ဖတ်၊ ကိုယ်ကထွက်တဲ့ အရည်မှန်သမျှကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဘို့ သုံးပါ။
• ပိုးက သွေးနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကထွက်တဲ့အရည်တွေဖြစ်တဲ့ အစာခြေရည် (အန်ဖတ်)၊ ယောက်ျား-မိန်းမကိုယ် အရည် (မဆက်ဆံမီ နှင့် ဆန္ဒပြည့်ဝအပြီး) တွေမှာ ပါနေတာပါ။ ဒါတွေကလွဲရင် မပါပါ။
• အလားတူ (အိုရယ်-ဆက်က်စ်) ကလဲ အတူတူလို့ ဆရာ့ဆရာတွေက ဆိုပါတယ်။
21 Aug 10, 12:21
ကန်တော့ဆရာ။ ယောက်ျားလေးများရဲ့ငယ်ပါက မာတင်းလာတဲ့အခါ အများစုက အပေါ်ကို ကော့လန် တတ်ကြပါတယ်။ အောက်ကို ငိုက်စင်းတဲ့ သူတွေအတွက် ဘယ်လို မကောင်းကျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါသလဲဆရာ။ မိန်းမရရင်ရော နှစ်ယောက်လုံးအတွက် ကျေနပ်မှု ပေးနိုင်ပါသလားဆရာ။
ပြဿနာမရှိပါ။ မျဉ်းဖြောင့်လိုဖြစ်ြဖစ်၊ မျဉ်းကွေးဖြစ်ဖြစ်၊ သန်မာမှု ဖြစ်ရင် ပြီးတာပါဘဲ။ ကျေနပ်မှုအတွက်လည်း ထိခိုက်စရာ မရှိပါ။ ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာမှာ ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း နဲ့ ဟော်မုန်းသတ္တိတွေအပြင် နည်းနာဆိုတာလည်း ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံ ဆိုတာလည်း ပါတယ်။ ကာလ-ဒေသ ဆိုတာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ မေးတဲ့ကိစ္စက ရုပ်ပိုင်းတခုထဲ ရှိသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအရေးအရာမျိုးဆိုတာ Instinct ဆိုတဲ့ အလိုလိုသိ၊ မွေးရာပါသိ၊ သဘာဝသိ၊ အသိထဲမှာ ပါပါတယ်။
Comment by (့) 13 hours ago
ချောင်းဆိုးရင် သောက်ရမဲ့ဆေး အမည်ကို ရေးပေးပါလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
ချောင်းဆိုရင် ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး သောက်ပေါ့။
တကယ်ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဘာ့ကြောင့် ချောင်းက ဆိုးရသလဲ၊ ဗက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်၊ တခြား ဥပမာ (တီဘီ)၊ ဆိုတာ သိအောင် လုပ်ရသေးတယ်။ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးမှာ ချောင်းခြောက် (လည်ချောင်းကဖြစ်တာအတွက်)၊ သလိပ်ထွက် (နူမိုးနီးယား စသဖြင့်အတွက်)၊ လေပြွန်ကျယ် (ပန်းနာ အတွက်)၊ နောက် တမျိုးက လူနာ စိတ်သက်သာရာ ရစေတာ ဆိုပြီး အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ဖြစ်နေသူ တယောက်ခြင်းအတွက်ကို သေသေခြာခြာ သိရမှ ညွှန်နိုင်တယ်။
အရေးကြီးတာက ချောင်းဆိုး ပျောက်ဆေး ဆိုတာမျိုးက ရောဂါလက္ခဏကိုသာ သက်သာစေတာမျိုး ဖြစ်တယ်။ ရောဂါဖြစ်စေတာကို ကုတာ မဟုတ်ဘူး။ အိပ်ပေါက်နဲ့ ဖါးကောက်သလို ဖြစ်နေတတ်တယ်။ မိုးလည်းကျနေပြီ မဟုတ်လား။
ဒူးခေါင်းမှာ အဖြူရောင် အကြောင်းလေးတွေ သုံးလေးကြောင်းရှိပါတယ်။ (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်တာများလို့ အကြောပြတ်တာလို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် လိင်မတူခြင်းဆက်ဆံလို့ဖြစ်တာလား။ အဲ့ဒါဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းလေး သိချင်လိုပါ ဆရာ။
လူပျိုဖြစ်ပြီးနောက် (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်တတ်တဲ့ အရွယ်မို့ ဒူးနေရာ အကြောတွေ ပြတ်တာရင် ဒီအလေ့ကြောင့်လို့ ပြောင်ချင်ကြတယ်။ လူပျိုဝင်၊ အပျိုဖြစ်ဆိုတဲ့ အရွယ် ရောက်ချိန်မှာ ကိုယ်ခန္ဓာ အချိုးအစား ပြောင်းလာလို့ ဖြစ်ရတာပါ။
Stretch Marks အကြောပြတ်ခြင်း ကို ဖတ်ပါခင်ဗျား။